Iilebhu zeWolfram Blockchain zazisa ngokudityaniswa kunye neTezos, kwiinyanga ezintathu emva kokudityaniswa kweCardano
Kuphela kweenyanga ezimbalwa emva kokudityaniswa kweCardano, iprojekthi ye-DLT iWolfram Blockchain Labs (WBL) iyiphindaphinda ngeTezos. Oku kuthetha ukuba abaphuhlisi abasebenza kwi-blockchain analytics kunye nezivumelwano zekhompyuter ngoku banokusebenzisa inethiwekhi yeTezos.
I-WBL ngumboneleli owaziwayo wezisombululo ze-ledger technology (i-DLT) ezincedisa kuphuhliso lweekhontrakthi ezifanelekileyo kunye nokusetyenziswa okwabelweyo (dApps). Yisandla se-blockchain soPhando lweWolfram, abadali beMathematika, iWolfram | iAlfa, kunye noLwimi lweWolfram.
Iprojekthi ibhengeze ngopapasho lwamva nje lokuba iTezos iyeyona blockchain yamva nje yokudityaniswa ngokupheleleyo kwi-WBL's DLT ecosystem.
Ngaphandle kokunceda abaphuhlisi abanee-analytics kunye nezivumelwano zekhompyuter zokusebenzisa i-Tezos blockchain, ukudityaniswa kubangele ukusekwa kwe-oracle echongiweyo enika idatha yeWolfram Alpha kubaphuhlisi besivumelwano.
Okwangoku, iTezos isebenzisa i-Nomadic Lab's Mi-Cho-Coq inkqubo yokuqinisekisa ngokusesikweni ukugcina isimilo esingaguqukiyo.
Ukukhutshwa kweendaba kugxininise ukuba iimveliso ezisebenzisa iTezos blockchain ziya kukhuseleka ngakumbi ngenxa yokuqinisekiswa ngokusesikweni. Isiteyitimenti songeze ukuba yinkqubo leyo "Ingqina ukuchaneka kweepropathi zekhontrakthi ehlakaniphileyo yokunceda ukunciphisa umngcipheko weebugs kunye nobunye ubungozi."
I-CTO ye-WBL, uJohan Veerman, uphawule ngolu phuhliso, esithi: “I-Tezos yindawo ebangela umdla yesizukulwana sesithathu ebonisa iinkonzo kunye nemisebenzi eya kuthi yandise okufumaneka kubaphuhlisi bethu. Siyavuya ukusebenza ne-TQ Tezos ekuziseni i-WBL ecosystem yezixhobo kwiTezos blockchain. ”
Umdibaniso ofanayo neCardano
NgoDisemba 2020, i-WBL yadibanisa enye iprojekthi ye-blockchain eyaziwayo-iCardano-esebenza ngokufanayo kumdibaniso weTezos.
I-WBL iqalile ukusebenzisa idatha kaCardano's DLT kwiWolfram Alpha ukunceda abaphuhlisi badibanise idatha yangaphandle kwizivumelwano ezifanelekileyo kwiprojekthi ye-blockchain.
Izicwangciso ezongezelelekileyo zibandakanya ukuphuculwa kwe-dApp ukuvumela urhwebo olusekwe kwi-blockchain kunye nemodeli yoshishino kunye nokusasazwa komxholo othile weCardano kwimfundo yezifundo ezipapashwe yi-WBL.
tags block Chain, Cardano, IITEKSI
I-Tezos ibhengeza ukuphuculwa kwenethiwekhi enkulu, njengexabiso le-XTZ
Iqonga lomthombo ovulekileyo iTezos isandula ukubhengeza ukuba izakukhupha eyona nto ibalulekileyo yokuphucula (i-Edo) kwi-blockchain yayo nanini na. Baqwalasele ukuba ukuphuculwa kuya kongeza umgaqo-nkqubo weSapling, amatikiti, kunye nexesha elitsha lokwamkela ukubuyisela ukuphuculwa kwexesha elizayo okunyusa ukusebenza kwenethiwekhi.
I-Tezos isebenzise le frenzy yakutshanje ejikeleze ithokheni yayo yemveli ye-XTZ, ethe yaveza ngaphezulu kwe-150% yonyaka ukuza kuthi ga ngoku ngexesha lokushicilela. Uhlaziyo lwangaphambili lukaTezos, iDelphi, lwasungulwa malunga neenyanga ezintathu ezidlulileyo kwaye lanciphisa iindleko zerhasi nge75%.
Inkampani iqaphele ukuba umthetho wayo omtsha weSapling uza kuvumela abaphuhlisi ukuba babe namandla "Iintlobo ezintsha zezicelo" ngokudityaniswa kwe "Ukuvota okanye ukuxhasa ukuthengiselana kweeasethi ngokuchaza okukhethiweyo." UTezos uxele ukuba ukusetyenziswa kwetikiti elinye kuya kusebenza njengesixhobo esifanelekileyo sokufikelela kwimisebenzi yesivumelwano. Ngaphandle kokunyusa ukusebenza konjiniyela, amatikiti ayenzelwe ukukhuthaza iikhontrakthi ezingcono ezikhuselekileyo nezinokudityaniswa kunye nokukhupha amathokheni.
I-Tezos isete ixesha elitsha lokwamkelwa kwabafundi kwiNkqubo yoTshintsho lwaBasebenzisi
Ixesha elitsha lokwamkelwa liya kujongana nemiba eqhelekileyo abajongana nayo abasebenzisi beTezos kwinethiwekhi ngexesha lotshintsho lweenkqubo ezintsha. Abasebenzisi beTezos ngoku banokuba namava emijikelezo emihlanu phakathi komhla wokuvunywa kwenkqubo yokwamkelwa (ihlala ijikeleze iiveki ezimbini). Olu luphuculo olubalulekileyo olusuka kwinkqubo yangaphambili, ebandakanya amaxesha amane ukuya kwimijikelo esibhozo. Oko kwathiwa, iTezos iphinde yaqinisekisa ukuzibophelela kwayo "Ukujika komthungo kuphuculo kubo bonke abasebenzisi."
Ukuphuculwa okutsha, i-Edo, kuya kujongana neebugs ezincinci, kukonyuse ukusebenza kwenethiwekhi, kunye nokusasaza ukusetyenziswa kwegesi ngakumbi ngakumbi kunangaphambili.
I-Tezos iyaqhubeka nokwenza amanyathelo abalulekileyo, kunye nenethiwekhi sele isenza izimvo malunga nokuphuculwa kwendalo elandelayo. Kwisibhengezo samva nje, iTezos iqaphele ukuba abasebenzisi mabalindele iindaba kuhlaziyo lwayo olulandelayo, uFlorence.
tags EDO, IITEKSI, I-XTZ